सागमा पदक विजेता खेलाडीलाई दिईने पुरस्कार बढ्ने – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ आश्विन २०७७, आईतवार ०१:१० English
सागमा पदक विजेता खेलाडीलाई दिईने पुरस्कार बढ्ने
काठमाडौँ, १० मंसिर । सरकारले दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगीता (साग) मा पदक विजेता खेलाडीलाई यसअघिको भन्दा धेरै राशीको पुरस्कार दिने भएको छ । आज काठमाडौंस्थित दशरथ रंगाशालामा सागमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुरस्कार राशी बढाईने जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित नभई यति रकम वृद्धि हुन्छ भनेर यकिन गर्न नसकिएपनि खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेमा उल्लेख्य रकम वृद्धि हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । यस अघि सरकारले १२ औं सागमा स्वर्ण विजेतालाई ३ लाख पुरस्कार दिएको थियो । रजत विजेतालाई २ लाख र कास्य पदक विजेतालाई १ लाख दिएको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा आयोजना हुने १३ औं सागलाई सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्व अभ्यासको रुपमा लिएको समेत बताए ।
१० मंसिर २०७६, मंगलवार १७:१३ मा प्रकाशित